SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiKalanga (ChekuBotswana) ChiKaren (S'gaw) ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Dagaare Dangme Danish Dutch Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Martiniquan Creole Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Ronga Russian Samoan Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvapupu zvaJehovha Zvinoparadza Mhuri Here Kana Kuti Zvinodzivaka?
SeZvapupu zvaJehovha, tinoshanda nesimba kuti mhuri dzedu nedzevavakidzani vedu dzirambe dzakasimba. Tinoremekedza Mwari nokuti ndiye akatanga urongwa hwemhuri. (Genesisi 2:21-24; VaEfeso 3:14, 15) MuBhaibheri mune mazano anobatsira vanhu pasi rose kuti vave nemhuri dzakasimba uye dzinofara.
Zvatinoita Kuti Mhuri Dzirambe Dzakasimba
Tinoedza chaizvo kutevedzera mazano ari muBhaibheri, nokuti anotibatsira kuva varume, madzimai uye vabereki vari nani. (Zvirevo 31:10-31; VaEfeso 5:22-6:4; 1 Timoti 5:8) Mazano acho anobatsira kunyange mhuri dzine vanhu vanopinda machechi akasiyana. (1 Petro 3:1, 2) Inzwa zvakataurwa nevamwe vane varume kana madzimai vakazova Zvapupu zvaJehovha:
“Mumakore edu 6 okutanga taroorana taigara tichipopotedzana. Asi mudzimai wangu Ivete paakazova Chapupu chaJehovha, rudo rwake nomwoyo murefu zvakabva zvawedzera. Izvi zvakabatsira kuti imba yedu isaparara.”—Clauir, wekuBrazil.
“Murume wangu Chansa paakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha, handina kuzvifarira ndichifunga kuti vanoita kuti mhuri dziparare. Asi ndakatozoona kuti Bhaibheri riri kutibatsira.”—Agness, wekuZambia.
Patinoparidza, tinoratidza vavakidzani vedu kuti mazano ari muBhaibheri angavabatsira sei
Kusarudza wokuroorana naye nokuchenjera
Kukunda matambudziko mugore rokutanga varoorana
Kugarisana nanavamwene kana kuti nemadzitezvara
Kuti vadzidzise vana
Kana wawakaroorana naye akasarudza kuva Chapupu zvinokonzera kuti mutange kunetsana mumba here?
Dzimwe nguva ndizvo zvinoitika. Somuenzaniso, muna 1998 tsvakurudzo yakaitwa neboka rinonzi Sofres yakaratidza kuti pamhuri 20 dzine murume kana mudzimai ari Chapupu, 1 yacho yakava nematambudziko akakura munhu iyeye paakatendeuka kuva Chapupu.
Jesu akagara ataura kuti vaya vanoita zvaaidzidzisa vanogona kuzotambudzwa nevoukama. (Mateu 10:32-36) Munyori wenhoroondo anonzi Will Durant anoti paitonga Umambo hweRoma, “chiKristu chaipomerwa kuti chinoita kuti dzimba dziparare,” * uye vamwe veZvapupu zvaJehovha ndizvo zvavanopomerwawo. Saka zvinoreva here kuti uya anenge ava Chapupu ndiye anokonzera kuti mumba muve nokusawirirana?
Dare reEuropean Court of Human Rights (ECHR)
European Court of Human Rights payaitonga nyaya yaipomerwa Zvapupu zvaJehovha yokuparadza mhuri, yakataura kuti voukama vasiri Zvapupu ndivo vanowanzokonzera kunetsana. Izvi vanozviita “nokusaremekedza kodzero ine hama yavo yokusarudza manamatiro ainoda yakasununguka.” Dare racho rakawedzera kuti: “Kunyange pakasava neChapupu chaJehovha mumhuri, vanhu vanototi vanetsane kana mumba mukava nemachechi maviri.” * Zvapupu zvaJehovha pazvinopikiswa, zvinoedza kutevedzera zano reBhaibheri rokuti: “Musadzorera chakaipa nechakaipa kuna ani naani zvake. . . . Kana zvichibvira, nepamunogona napo, ivai norugare nevanhu vose.”—VaRoma 12:17, 18.
Nei Zvapupu zvaJehovha zvichida kungoroorana pachazvo?
Zvinoteerera murayiro weBhaibheri wokuti rooranai “munaShe chete,” kureva kungoroorana nomunhu wavanonamata naye chete. (1 VaKorinde 7:39) Uyu murayiro uri muBhaibheri uye unobatsira. Somuenzaniso, imwe nyaya iri mubhuku rinonzi Journal of Marriage and Family ra2010 yakati, “vanhu vanoroorana vaine chechi imwe chete yavanopinda” vanowanzowirirana chaizvo. *
Kunyange zvakadaro, Zvapupu hazvikurudziri vavanonamata navo kuti vaparadzane newavakaroorana naye kana asiri Chapupu. Bhaibheri rinoti: “Kana hama chero ipi zvayo iine mudzimai asingatendi, asi iye achida hake kugara nayo, ngairege kumusiya; uye mukadzi ane murume asingatendi, asi murume wacho achida hake kugara naye, ngaarege kusiya murume wake.” (1 VaKorinde 7:12, 13) Zvapupu zvaJehovha zvinoteerera murayiro uyu.
^ ndima 14 Ona bhuku rinonzi Caesar and Christ, papeji 647.
^ ndima 15 Ona mutongo wakapiwa panyaya inoti Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, pamapeji 26-27, ndima 111.
^ ndima 16 Ona bhuku rinonzi Journal of Marriage and Family, Volume 72, Number 4, (August 2010), peji 963.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvapupu zvaJehovha Zvinoparadza Mhuri Here Kana Kuti Zvinodzivaka?
ijwfq nyaya 38
Vaudze Kuti Unovada